AA သည် KIA ၏ မွေးစားသားဖြစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အမာခံနယ်မြေ တည်ဆောက်လာခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃- ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA သည် ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA ၏ မွေး စားသားဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ အချိန်တွင် AA သည် ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်း အမာခံနယ်မြေ၊ စည်း ရုံးရေးနယ်မြေများ တည်ဆောက် လာသည်ကိုတွေ့ရပြီး တပ်မတော် အနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦးက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် ရန်ကုန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ပြုလုပ်နေ သည့် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန် ကြားရေးကော်မတီ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ၌ ¤င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”AA နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရ ရင် AA ဟာ KIA ရဲ့ မွေးစားသား ပါ။ သူတို့ဟာ လိုင်ဇာကနေ ရခိုင်မှာ နေရာယူဖို့အတွက် ရခိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ရခိုင်မှာ ခြေ ကုပ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်”ဟု ¤င်း က ပြောသည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို လက်မခံနိုင် သည့်အချက်သုံးချက်ရှိပြီး ယင်းအ ချက်သုံးချက်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တ ရားပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ် အောင်၊ ထိခိုက်နာကျင်အောင် ပြု လုပ်ခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
ယင်းအပြင် ASRA ၏ အကြမ်း ဖက်မှုကြောင့် ဒေသတွင်း မတည် မငြိမ်ဖြစ်လာမှုကို အခွင့်ကောင်းယူ ကာ AA သည် မြေပေါ်၊ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း လှုပ်ရှားနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက် ရသေ့ တောင်မြို့နယ် မင်းဖူးကျေးရွာအနီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခု မိုင်း ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွင် မရီရီစိုး (၁၈)နှစ် သေနတ်ကျည် ထိ၍ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ယင်းသေ ဆုံးမှုသည် တပ်မတော်ဘက်မှပစ် သည့် ကျည်ဆံကြောင့်ဟု ပြောကြား မှုများရှိသည့်အပေါ် တပ်မတော် က ငြင်းဆိုသည်။
”တပ်ကလူတွေက တံတားဖြတ် တဲ့အချိန်မှာ မိုင်းဆွဲပြီးတိုက်တယ်။ ရွာထဲကို အရပ်ဝတ်နဲ့ ဝင်ပြေးတယ်။ အင်အား ၁ဝ ယောက်လောက်ရှိ တယ်။ အဲဒီကနေ ရွာထဲကနေ ပြန်ပစ် တယ်။ တပ်ကလည်း ပြန်ပစ်တယ်။ ထပ်ပြီးတော့ပစ်တော့ အရပ်သူတစ် ယောက် သေသွားတယ်။ မရီရီစိုး သေသွားတယ်။ ဒါက ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း။ ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်တာကတော့ ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက လှမ်းပစ်တဲ့နေရာက ဝေးပါတယ်။ AA နဲ့နီးပါတယ်။ သူတို့ပြောတာ တော့ ကျွန်တော်တို့တပ်က ပစ်တယ် လို့ စွပ်စွဲတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံး သပ်တာကတော့ AA ကပစ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ AA က တမင်သတ် သတ်ပစ်တာလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ် မယ်” ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကပြောသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ပဲပုပ်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာပေး?
ပြည်သူပိုင်အားကစားကွင်းမြေဟုဆိုကာ နေရာပြန်လည်ရရှိရေး ရွှေပြည်သာဒေသခံ ၂ဝဝ ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ကော်တင်ဟို ထွက်ခွာခြင်းက ရိုက်ခတ်မှု မရှိနိုင်ဟု ချိန်ဘာလိန် ဆို၊ တစ်ချိန်တွင် လီဗာပူးနည်း?